आज भदौ २८ गते शनिबार, हेर्नुहोस् शुभदिनको शुभ राशीफल - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
आज भदौ २८ गते शनिबार, हेर्नुहोस् शुभदिनको शुभ राशीफल
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:३१ September 14, 2019 Nonstop Khabar
वि.सं. २०७६ भदौ २८ गते शनिबार। इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर १४। नेपाल संवत ११३९ ञलाथ्व। भाद्र शुक्लपक्ष। पूर्णिमा, ८:४१ उप्रान्त प्रतिपदा। उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य)
आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि परिनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्नेछ। मिहिनेत गर्दा पछि फाइदा हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। परिस्थितिवश आफ्नो कर्मफल अरूलाई सुम्पनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। साँझतिर यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। खर्च लागे पनि पछिका लागि लगानी गर्ने समय छ।
अरूका काममा श्रम तथा बुद्धि खर्चनुपर्ला। वचन पुर्याउन नसक्ता आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। जिम्मेवारी भने बढिरहनेछन्। आफ्ना काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ। साँझदेखि आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा विशेष जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ। तर सोचेको उपलब्धि नहुन सक्छ। अरूका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ।
अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला। नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनुहोला। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरू निम्त्याए पनि गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला, साँझदेखि सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नाम, दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ।
परिस्थिति अनुकूल रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहला। निम्तो आए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ। भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउला। बोली–व्यवहारमा संयम रहँदै शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। साँझतिर कामको चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल रहनेछ। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। प्रयत्न गर्दा सामान्य समस्या सुल्झाउन सकिनेछ।
ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउन सक्छन्। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। वादविवादबाट जोगिँदै समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ।
प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। पहिलेका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन्। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले आँटेको काम बन्नेछ। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। मिहिनेतले बिस्तारै फाइदा दिलाउनेछ। पशुधन र जमिनबाट लाभ उठाउन सकिनेछ।
अरूको विषयमा चासो राख्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। आफ्नै वचन पूरा गर्न नसक्दा नैतिक प्रश्न देखापर्न सक्छ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने चेष्टा गर्नुहोला। साँझदेखि पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सिर्जनात्मक कामले प्रतिष्ठा दिनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने अहिले मिहिनेत गर्दा पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ।
अवसर प्राप्त भए पनि कर्तव्य पूरा गर्न नसकिएला। काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तापनि मिहिनेत गर्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। साँझदेखि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ र आम्दानी बढ्नेछ।
हेर्नुहोस धनकुटा, सुनसरी, मोरङसहित अहिलेसम्म आयोगले सार्वजनिक गरेका जिल्लाको प्राथमिक तहको सबै नतिजा
Nepali Social Leaders Support for the Establishment of Sustainable Peace